Adigaa i qaadaye i qari waa sheeko cajiib ah.
Waxaa jiray laba tuug oo saxiib aha meelna ku wada noolaa, labadan tuug waxa ay isugu faneen anigaa kaa xarifsan iyo aniga ayaa kaa xariifsan, marka waxay ku heshi yeen in mid kastaa soo ban dhigo waxa uu isla hayo marka tuuga 1 aad waxa u yidhi waligaa dad aad xaday maku duceyeen waliba abaalmarina maku siiyen? arintan waxayxiise galisay tuga labaad oo jeclaystay in u ogado xirfada uu isticmaalay saxibkiis.
Tuuga koowad ayaa bilaabaya sheekdiisii waxa uu yidhi malin ayaan arkay hooyo sidata alaab badan oo gaadhi kadagaysa, hooyadan xamilo ayay ahayd safar dheerna way ka timi markii an isha ku dhuftay inay u bahantahay cawimo ayaan kafaa idaystayjaniskan markiiba waxan sinaxariisle uga codsaday hooyadan in aan cawiyo oo aan alabadan laqado, nasiib wanaag way iga aqbashay, sidii ayaan alaabadii ku qaday una geeyey mesha ay doonaysay aniga oo boorsadi aylacagta ku sidatayna gacanta hoos ugalinaya kalabaxay lacag si aanay i dareemi karin, anigoo hadba uga shekaynaya xadiiska sheegaya in dadku is cawiyo si iyagana ilaahay ucawiyo.
Markii hawshii dhamaatay ayaa hoyadii ii ducaysay iina mahad celisay waliba lacag abaal marina isiisay anigoo lacagtaana ku diiday ugu danbayn wanka ogoladay wana ka qaatay,! Tuu gii 2 ayaa yidhi ma intaas ayaad ilaamanta nagu dalisay war anigu waxan sameyey hadaad aragto ilahay yaab ayuu kuu keeni ;waxan qaatay oo xaday raadiyo shidan oo ladhagaysanayo kawaran xirfadayda oo waliba yaala meel dadki dhagaysanayey dhexdooda ah.
Waxaa kabaxayey radiyaha heeso aad umacmacaan waa xili duhur ah inanta jikada ku jirtaa ad ayay uladhacsantahay heesaha socda waxanay ku kala guraysaa qadadii rerka oo loo diyaar garoobayay, markan xaladan arkay damacbaa igalay radiyahaas shidan lakin wa inan qorshe la imaadaa an ku qaato waxan soo qatay tuumbo yar oo dhuuban waxana kariday daqada radiyaha yaalo aniga oo afka ugalinaya halka laga naaquso codka.
Markaan hubiyey in codkii aamusay ayan kaasaray oo aniga ayaa ku hadlay tumbadii aniga oo hada wariye matalaya waxana idhi dhagaystayaal naga rali ahaada waxan qadar daqiiqado ah ku kalamaqnaan doona hawada anaga oo halkas idinka sii wadi doona heeso xul ah intas markaan idhi wan xidhay codkii kadib inantii cuntada kalaguraysay ayaa baxday oo hawsheedii sii bilaabatay ana intaan daqada gacanta ka galiyey ayaan iska lalaadsaday radiyi hiimarka aqristaha shrafta lahoow labadan saxiib ke ayaad u aragtaa inu tuug nimada xarif ku yahay soo qor rayi gaga adigo noo soo marinaya barta faallooyinka ee kuxusan hoos.
Waxaa idiinsoo diiyarisay:
Muna Mohamed Cabdillahi,
Idinkaa meesha noo jooga !! Maqaal xiisa badan ..
Waxaa hubaal ah,xaqiiqo nool ah ,Dawlado iyo Dadyow badanina waaya-arag u yihiin: in aynaan dib-u-dhac mooyee, aynaan asaaggeen la saan-qaadi karayn, horumarna tiigsan karayn, inta aan isku qaldayno Qabyaalad iyo Qarannimo.
Haddaan lays yeelyeelayn, waxay Odayaasha iyo Wax-garadka Soomaaliyeed wada og-yihiin, kana dheregsan yihiin; sida ay u kala duwan yihiin, una kala qiimo badan yihiin:-”Maxaad taqaan iyo Yaad taqaan”.
Dunida horumartay, waxay ku shaqeeyaan: in qof kastaa lagu fariisiyo Kursiga munaasibka u ah, ee uu ku habboon yahay; leeyahayna: Aqoonteeda, Kartideeda iyo Khibraddeedaba. Iyagu waa ay ka gudbeen Qabyaalad, oo waxay ka koreen dhinacyada: Aqoonta iyo Dhaqaalaha. Xaddaarad, Teknolojiyad iyo Cilmi ayaa laysku dhaafay.
Haddii xil-isu-dhiibidda iyo qabashada Masuuliyadda Qarameed ay noqoto mid ku timaadda Sifaalahaas:Aqoonta, Kartida, Khibradda iyo weliba Waddaniyadda iyo Daacadnimada, aanna la eegin Qabiil iyo Reer-hebel; waxaa hubaal ah: in ay markaas Qarannimada iyo Hawlaha dawladeed, ay isku taagayaan Lugo iyo Tiirar adag.
Haddii la helo Maamul sidaas lagu soo dhisay, laguna dhaqmo Caddaalad wax ku -kala -qaybsi iyo ku-dhaqanka hadba Shuruucdii iyo Dastuurkii la degsado oo laysku raaco, meelna looga soo wada jeesto, oo lagana midaysan yahay; goortaas, waxaa hubanti ah: in lagu taagan yahay Tubtii toolmoonayd….
Waa xaqiiqo in dadka qaarkood ay igu qoslayaan, oo ay weliba kuwa kalena igu yaqyaqsanayaan, iyagoo eegaya xilliga ay Soomaaliya marayso, Wacyiga bulshadeed ee hadda jira, sida ay wax u socdaan iyo waxa aan ka hadlayo. Waxaanse ku kalsoonahay in ay inta badani igu raacsan yihiin fikirkaas,oo ila aaminsan yihiin: inay taan ka hadlayaa tahay: tii saxa ahayd -ha la rabo ama yaan la rabine-
Waxaan jeclahay: inaan hoos ugu soo daadego: waxa igu qaaday Qormadan mutawaadica ah, oo ay intaan soo sheegayna Koofiyadda(Hordhac) u tahay. Waa Arrin i qabsatay marar badan, aanna hubo in ay qof kasta oo Xafiis Soomaaliyeed hayaa,qabsatay ama uu joogto ula kulmo.
Adigoo fadhiya Xafiis uu Qaranku leeyahay, dadka Soomaaliyeed oo dhanna loogu adeegayo oo ka wada dhexeeya, ayuu kuu imanayaa “Shakhsi”(Qof), kuu soo muraaday. Wuxuu Qofku rabaa: inaad u fuliso, u meel-mariso, una qabato: arrin uusan xaq u lahayn;qalad ah;sharciga aan waafaqsanayn;dhaqanka wanaagsan ee Soomaaliyeed iyo Diintaba ku xun.
Wuxuu kuugu soo gabbanayaa, kuna soo duggaalayaa: Qabiil, isku-reernimo, wadaaynimo, aqoon hore, derisnimo, xididnimo, xigtanimo, qaraabanimo meel fog laga soo jaf-jafayo iyo shu’uun kale, oo ay xitaa ka mid noqon karto jiritaanka xiriir-caadifi ah(love).
Qofkan, ayaa foodda ku soo qabsanaya, kuguna beer-laxawsanaya -si aad u soo jilicdo- :-”Adigaa meesha ii jooga” ee waa-kukaas hee. ama wuxuu hadalkiisa u dhigayaa sidan:-”Idinkaa meesha noo jooga”….!!.
Haddii qofkii Masuulka ahaa, ee hawlaha Qaranka u hayay lala hoos fariisto “Adaa meesha noo jooga”, oo ay ujeeddadu tahay : inuu fuliyo dano gaar ah, oo aan sharciga waafaqsanayn; waxay taasu xagal-daacinaysaa amaba ragaadinaysaa hawlihii qarannimo, caddaaladdii iyo sinnaantiiba. Waxay Culimada xagga Sharcigu yiraahdaan:-”Haddii qofka la duudsiiyo xaqiisa oo keliya ma aha xaq-darro ee xitaa haddii qofka la siiyo wax uusan xaq u lahayn, waa xaq-darro”…!!.
“Adigaa/Idinkaa meesha noo jooga”,waxay noqon kartaa Seef laba afle ah. Waxaa loo adeegsan karaa, ayna tahay in sidaas la yeelo:”Idinkaa Soomaaliya oo dhan meesha u jooga” ee ilaaliya, difaaca, oo u dhinta Soomaaliya iyo Soomaalidaba. Ku-shaqeeya walaaltinimda, wadajirka, midnimada,caddaaladda, sinnaanta iyo kor u kaca magaca Soomaaliyeed.(Soomaaliyeey toosa…toosa oo isku tiirsada…hadba kiinna taag-daran, taageera weligiin)….!!
Aduunyada Nin noolow Maxaa Aragti Kuu Laaban.Maqaal Xiiso Badan
Maahmaah soomaaliyeed ayaa tidhaahda nin noolow maxaa aragti kuu laaban. Saleban Cadowtoosiye oo in badan goobo iyo goleyaal loo wada joogay ka shegi jiray inuu yahay nin wadani ah oo u dagaallamaya xoraynta shacabka Gobolada SSC,
shalayna calanka somalia hadhsanayay ee dadka shacabka ah u adeegsanayay helista Damaciisa siyaasadeed iyo Dantiisa gaar ahaaneed, in badana dadkiisa ku beer laxawsanayay waxaan idinka xoraynayaa Maamulka hargaysa Iyo Gumaysiga Beesha Isaaq, ayaa maanta wuxuu ku qancay xil wasiir hoose oo ah wasaarada barakacayaasha (dib u dajinta) Maamulka Somaliland.
hadaba shacabka Buuhoodle oo muddo labo sano ah weerar toos ahi kaga soconayay maamulka Hargaysa ayaa qurbajoogta deegaanada Khaatumo waxay dacwad u gudbiyeen beesha caalamka taas oo ay ku sheegayeen tacadiyada xuquuqul insaanka ka dhanka ah, sida tiknikadii shacabka lagu xasuuqay iyo taayirka beebeega ee la marsiinayay Dhaawacyadii dagaallada, ceelashii biyaha ee laga fadhiistay xoolaha iyo maatada iyo bililiqadii Magaalada Sooljoogto, ayaa maanta waxay arrintaasi u muuqataa mid siilaanyo baabi’nteeda uu u adeegsanayo Saleban kii shalay ku sifaysnaa Halyeyga Maantana Horgalaha noqday.
Siyaasiyiinta Maamulka hargaysa oo ku fashilmay inay xoog ku qabsadaan deegaanka Buuhooodle, ayaa garwaaqsaday in aysan beeshoodu xoog ku qabsankarin beesha dhulbahante tusaale iyo Casharna ka qaatay Dagaalladii ay Ku jabeen ee ay la galeen shacabka reer Buuhoodle,waxayna fahmeen in aysan guul ka gaadhi karin deegaankaas ilaa ay maraan dariiq kale oo siyaasadeed.
Siilaanyo waxa uu markan u wareegay siyaasad cusub, taas oo shacabka reer Buuhoodle intooda badani si waadax ah u fahasanyihiin. siyaasadaas oo qodobada salka u ah ay ka mid yihiin
1. In Cadow toosiye iyo kuwa la fikirka ahi ay deegaanka Buuhoodle yimaadaan kana abuuraan colaado iyo is nacayb dhex mara beelaha walaalaha ah ee deegaanka.
2. Maalgalinta shakhsi kasta oo abuuri kara qalalaase iyo colaad.
3. In Fadqalalooyin iyo galaangal lagu sameeyo shacabka deegaanka, dagaal sokeeyena dhexdooda laga bilaabma. sidoo kale waxa hanti badan lagu bixinayaa kala jiidashaa iyo hubaynta beelaha walaalaha ah.
4.Hadii sadexdaas qodob oo hore hir galaan waxa xigaya oo daba socda Ciimadada Maamulka somaliland iyo maleeshiyo beeleed Isaaq ah oo isku dayaya inay soo weeraraan shacabka reer Buuhoodle, iyagoo sii wiiqaya awooda shacabka deegaanka
5. Xasuuqa, dhaca iyo barakicinta shacabka iyo qabsashada hubka deegaankan iyo dhul ballaadhsiga beesha siilaanyo waa hadafka ugu danbeeya ee laga leeyahay deegaankan
Hadaba maxaynu ka yeelaynaa Cadowgaas iyo weerarka inagusoo maqan?
1. waa in si deg deg ah looga shiraa iyadoo beel kasta laga saxeexayo in cidii ka socota somaliland ee deegaankeena soo gasha dhiiggoodu xalaal yahay, aan la isu qabsankarin meelna loogasoo wada jeedo
2.waa in Dowlad goboleeda Khaatumo uu si degdeg ah usoo diraa siyaasiyiin Miisaan leh, oo abaabuli kara shacabka, sida Madaxweyneyaal, wasiiro iyo garaadadii beesha.
3. waa in la diyaariyaa ciidamadadii difaaca Dowlad Goboleedka Khaatumo ee deegaanka, lana sugaa xuduuda deegaanka
4. waa in la sameeyaa waci gelin, iyo soo noolaynta Dareenka shacabka deegaanka
5. waa In Jaaliyadaha Dhulbahante ay isu kaashadaan maalgalinta Ciidamada Difaaca Deegaanka, maadaama Buuhoodle uu yahay Gobolka kaliya ee maanta xor inoo ah
6. waa In dhaqaalaha Ku baxa Dowlad goboleedka Khaatumo 70% loosoo warejiyaa difaaca buuhoodle, maadaama aanay muuqan deegaan kale oo maanta laga abaabulayo dib u xorayn, xoogana aynu saarnaa Dardar galinta maamulka iyo dhaqaajinta wasaaradaha jira ee aan wali wax muuqda qaban
7. waa in aynu Qaacido Caam ah ka qaadanaa Maahmaahda Soomaaliyeed ee tidhaahda “Mar i dage allah ha Dago, Labo jeer i dage se anaa isdagay” waana in aynu marwalba ka digtoonaanaa Siyaasadii Sool lagu qabsaday in ay Buuhoodle ka bilaabato
8. waa in la dardar galiyaa Dowladaha Hoose, Dhismaha Bilayska, Sirdoonka iyo Ciidamada Difaaca deegaanada Khaatumo
9. Wax yar oo tayo leh ayaa ka fiican wax wayn oo aan tayo lahayn sidaa daraadeed waxaan Madaxda Khaatumo ugu baaqayaa in xoogga la saaro sidii intaan la gaadhin xoraynta deegaanada maqan bal marka hore Juhdi iyo dadaal lagu bixiyo xoojinta iyo xasilinta deegaanada xorta ah, min tuulo ilaa gobol.
10. Hadii qodobadaas aan soo xusay aynu qaadano Cadow toosiye iyo calooshiisa u shaqaysteba Cidla ayay ku bakhtiyayaan, Cid ay wax yeeli karaanna Ma jirto.
ugu danbayntii Cadow toosiye iyo Calooshooda u shaqaystayaashaba waxaan leeyahay Rasaastii kululayd ee Kalshaale aad ku jabteen kama dhammaan deegaankan, Hammigiinana hortaa jireba waa.
Bulshada reer Khaatumo waxaan leeyahay Midnimo ayaa lagaga bxi karaa colaada inagusoo waajahan. Buuhoodle badbaadadeeduna waxay Muhiim u tahay Jiritanka Dowlada Khaatumo State Of Somalia.
Abdirahiim saleban Faarah (Rabiish)
Waa maxay Danta Kenya ay ka leedahay Magaalada Kismaayo ???
Soomaaliya ayaa leh dhul lagu tilmaamo inuu dhaco dhul barwaaqo ah, sida beeraha iyo kheyraadka badda waxaa la saadaliya in dalka uu leeyahay Keyd badan badrool iyo macaadin ka badan bulshada iskaba day inta qarsan
Soomaaliya waxaa ku xeyran Dowlado dadkooda ay gaajeysan yihiin, Kenya tani markii ay dhacday Xukuumadii Dhexe waxaa dalkeeda ku qul-qulaayay Qaxooti soomaaliyeed oo ay marti galisay iyada oona u furtay Xirooyin lagu quudiyo qaxootiga
Shacabka soomaaliyeed waxaa lagu tilmaama shacabka qurah ee Kheyraadka dalkooda ka baahan waxaana si joogta ah dhaqaalahaasi u gurta Dowladaha Africa oo ay gaajadu la daristay
Kenya waxa ay naas nuujineysaa Maleeshiyaad Soomaali ah oo iyagu aan u dhaga nugleen in Dalka Somalia laga hirgaliyo Dowlad madaxbanaan oo iyadu isku filan si ay uga dharagto Kheyraadka dalka hooyo ee Somalia
Kenya waxa ay caalamka ku indha sarcaadisay inay quudiso Bulsho badan oo soomaali ah kuwaasoo magan-galyo u jooga gudaha dalkeeda waxa ayna halkaasi ku hanatay in Hay’adaha iyo Dowladaha caalamka ay dhaqaalaha Qaxootigaasi soo marsiiyan Dowladda Kenya halkaasina kaga tagri fasho
Xukuumadda Kenya ayaa iminka maalgalineysa Maleeshiyaad iyagu naftooda u huray inay Magaalada Kismaayo mar qurah u gacan galshaan Ciidamada Kenya si halkaasi Kenya ay uga adeegato kahor inta aan la hirgalin dowlad soomaali ah oo iyadu quwad ama awood laeh
Kenya waxa ay talaabadeeda ugu horeysay ka bilowday inay qabsato Xeebaha Kismaayo si halkaasi ay uga helaan hantida badda Somalia oo umadda soomaaliyeed aan kawarqabin in badaasi ay iyagu leeyihiin waxaana u sacaba tumay Boqolaal maleeshiyaad soomaali ah oo iyagu adeeca awaamirta Kenya
Waxaa dhagaha farta gishtay Dowladaha Caalamka oo iyagu iska indhatiray in xukuumadda Kenya ay kutagri faleyso hantida Somalia Xukuumada Somalia iyaduna malahan awood ay isaga celiso Dowladda Kenya taasoo ay tusaale kaga filantahay tababaro la’aanta heysata Ciidamada Somalia
Kenya waxa ay baadi goob ugu jirtaa sidii ay ku hanan lahayd Badroolka iyo macaadinta ku jirta dalka Hooyo iyada oo adeegsaneysa Magaalada Kismaayo waxaa jooga Argagixiso duulan igu ah oo aan ciribtiraaya calamkuna waxa uu qalinka ku duugay in Kenya ay Cinwaan ka dhigato ciribtirka Alshabaab Hayeeshe sheekadu sidaa wey ka duwantahay
Xukuumadda Kenya waxa ay wadataa Maamulo iyada daacad u ah islamarkaana fulinaaya awaamirta Kenya waxaana hormuud u ah Axmed Madoobe oo isagu sabab u noqday in Kenya ay soo gasho Dhulka Somalia si uu mar qurah u hanto ka amrinta Magaalada Kismaayo waxaana intaa bar-bar socda Qabaa’il dhulkaasi daga oo iyaguna afka kala furtay sheegayna in Kismaayo ay kusii jeedo wadadii Muqdisho ay iminka kasoo bogsatay
Ciidamada Kenya waxa ay iminka bilaaben in Xeebta Kismaayo ay kasoo dajiyaan hub iyo raashiin dhacay oo ay ku sumeynaayan Ciidamada Dowladda iyo shacabka magaaladaasi kunool iyaga oo hal kudhig ka dhigtay inay caawinaayan boqolaal Qoys oo iyagu u tabaaleysan helitaanka raashiin iyo daawo
Sidoo kale Kenya waxa ay iminka bilowday inay Xeebaha Kismaayo ka dhoofiso Meydad iyo dad nool oo iyagu lagu tuhmaayay inay katirsan yihiin Al-Qacida muhiimna u yihiin xukuumadda Kenya, waxaana sidoo kale laga dhoofiyaa Kunteenaro oo aan lagaraneynin waxa ku jira
Kenya waxa ay iminka Mushaar ku filan u la’dahay Ciidamadeeda kuwa Gudaha iyo kuwa Daafaha Kenya ku suagan oo iyagu dhac u geysta Muwaadiniinta soomaalida ee ka barakacay Dagaalada Somalia magan galyana u raadsaday Dalka Kenya , Balse waxaa iminka muuqda in Xukuumadda Kenya ay heshay Dhaqaale ku filnaan kara shacabka iyo xukuumada Kenya Dhaqalahaasoo ka imaanaya Xeebaha Kismaayo oo iminka la Oran karo waxa ay gacanta u gashay Dowladda Kenya
Ciidamada Kenya ee ku sugan Xeebaha Kismaayo waxa ay mamnuucen in Saraakiisha iyo Ciidamada Dowladda Somalia ay u gudbaan dhanka Xeebaha si looga ilaaliyo Ogaan shaha Howlaha Kenya ay kawadato Badda Kismaayo, waxaana xusid mudan in Ciidamada Raaskambooni iyaguna laga mamnuucay inay dhex-galaan Ciidamada Kenya inta laga dhisaayo maamul
Kenya wey tashatay kahor inta aan maamul loo dhisin Shacabka halkaasi kunool waxa ayna dilal u geysataa Culimada,ardayda,aqoonyahaanada halkaasi ku sugan oo iyagu laga yaabo inay sabab u noqon karaan in Ciidamada Kenya ay dib uga baxaan Magaalada Kismaayo waxa ayna Go’aansatay Kenya inay cirib tirto aqoonyahaan waliba ee kasoo horjeysan karo Ciidamadeeda
Gabagabo iyo gunaanad Dowladda Kenya waxa ay iminka heshay rajadii ahayd in mar qurah ay maamulato Magaalada Kismaayo oo ah dhul barwaaqo waxa ayna weysay cid arintaasi kala hadasho
W/Q. Wariye Anwar Bakhiit
Sheeko xiiso: Dameer u dhashay Somaliland oo ka soo jeeda gobolka maroodi-jeex gaar ahaan caasimada Hargeysa
Marka hore waxan salaamayaa dhamaan Bahweynta saxaafada aniga oo uga mahad celinaya sida qiimaha iyo sharaftu ku dheehan tahay ee ay bulshada ugu soo gudbiyaan fikirkooda ay ku cabirayaan kolba xaaladaha ka jra dalka aniguna maanta waxa aan halkan ku cabirayaa magaalkan oo runtii igu dhshay markaan indho indheeyey xaaladaha maanta ay ku sugan yihiin Ururada Asxaabta ee aynu sugayno waxa ay kala calafqaadaan marka ay dhacdo doorashada Deegaanku oo aan anigu u soo sharaxay Dameerkan aad u jeedaan maanta.
Dameerkani waa musharax u tartamaya xildhibaanimada golaha degaanka Hargeysa. Dameerkana magaciisa waxa la yidhaa Qoofal-Han Yare. Waxaanu codsi isku mid ah u dirayaa dhamaan sagaalka ururu siyaasadeed ee ku tartamaya doorashooyinka golaha deegaanka Somaliland.
Ku: Dhamaan Sagaalka Urur siyaasadeed
Og: Gudiga doorashooyinka Qaranka
Og: Dhamaan Hay’addaha xuquuqal xayawaanka
Ujeed: Codsi Musharaxni mo gole degaan
Anigoo ah Qoofal Hanyare ahna muwaadin reer Somaliland ah, kana soo jeeda bahweynta xaywaanka ku nool magaalooyinka Jamhuuriyada Somaliland, ahna dameer u garba-beelay qaranimadeena; waxaan si xushmad iyo sharafi ku dheehan tahay idiinka codsanayaa inaad ii ogolaataan in aan kamid noqdo xildhibaanada u tartamaya golaha deegaanka caasimada Hargeysa,anigoo diyaar u ah inaan buuxiyo dhamaan wixii shuruudo ah ee la iiga baahan yahay.
Sidaa daraadeed Waxaan halkan idiinku soo gudbinayaa sooyaalkaygii nololadeed, waxqabadkeygii, ammaanadeydii bulshada iyo haddii aan ku guuleysto tartanka waxa aan iidiin qaban doono.
Waxaan dhashay sanadkii 1977kii kuna dhay magaalada Hargeysa. Xili uu socday dagaalkii u dhaxeeyey dawladahii Itoobiya iyo Somaliya, isla sanadkaa gudihiisa ayaa aabahey oo raaf lagaga kaxeeyey magaalada Hargeysa, ku shahiidey isagoo sahey gargaar ah u sida ciidan ku go’doonsanaa buuraleyda diridhabe.
Waxaan mudo sadex sano ah ku dhex noolaa beerihii waaweynaa ee ku yaaley hareeraha dooxa hargeysa, anigoo ka heli jirey daaq igu filan xiligaa oo dhulku barwaaqo ahaa.
Sanadku markuu ahaa 1981kii ayaan dooxa ka soo baxay anigoo shaqo doon ah. Muddo lix bilood ah markaan indho indheeyey, hab nololeedkii dameerihii ila qayrka ahaa ay ku noolaayeen, waxaan xamili waayey inaan ka mid noqdo, maxaa yeelay xiligaa waxa dameeraha la saari jirey laba mitirik tan oo u dhiganta 40 kiish oo aanan anigu awood u laheyn inaan qaado. Sidaa awadeed waxaan go’aansadey kol hadey ii tahay inaan culeys qaado kaas oo ka badan xamilkeyga inaan xoogeyga iyo socdaalkeyga uga faa’ideeyo dadkeyga. Waxaan ku biirey urur qaadka u soo koontarabaanin jirey Hargeysa oo la odhan jirey ma nastayaasha.
Walaalayaal waxaan qaadi jirey toban baag oo qaad ah iyadoon basbaas iyo xaydh midna dabada la iga marin. Waxana socon jirey 15km saacadiiba anigoon raran.
Walaalayaal xukuumadii militeriga ee Maxamed Siyaad Barre inaateyn cadaawadeedii shacabka u cadeysan, waxana ahaa dameer aamin ah oo rarkasta oo lasaaro aan la garab marin halkii loogu talo galey.
Walaalayaal waxaan aqoon dheeraad ah u lee yahay caasimada aynu ku noolnahey ee Hargeysa, anigoo rar lamarey dhamaan wadooyinka dhexmara Hargeysa. Walaalayala mustaqbalkeygii iyo noloshadeydii waxaan u hurey oo danteyda gaarka ah aan u garab marey sidii dadkan iyo dalkani u horumari lahaayeen. Arintaas oo I dhaxalsiisey inaan noqdo dameer gobla’an ah. Runtii maan guursan kari waayine waad ogtihiin dameer dhid ahi magaalada ma joogto, balse markaan hawdka qaadka ka soo daabuli jirey wey ii suurtoobeysay inaan guursado oo tiraba ilaa shan gashaantimood oo dameero dhidig ah waan la kulmey, hase ahaatee waxaan go’aansadey ilaa intaad wax noqoneysaan inaan iska joogo oo aanan dameer yar oo kale soo lugoyn.
Walaalayaal maanta waxa la gaadhey xiligii aad ii abaal celin laheydeen ee aad isoo sharixi laheydeen ee aad waliba warqad ogolaansho ah iiga soo qaadi laheydeen wasaarada xanaanada xoolaha iyo dawlada hoose ee Hargeysa, warqadaas oo ah ogolaansho dameer dhidig; inaabtidey oo ilaa xiligii halganka aanu balansanayn ayaa ii xanibnayd oo cidlo ka ooyeysa balse markay maqashay musharaxnimadayda hanqalka la soo kacday. Waxaad ogtihiin hadaan tartanka ku guulaysto oo aan dhargo inaan magaalada qof ka seexanayn qayladayda ileen doobnimaa I shidaysee.
Hadii inaabtiday la ii ogalaado, sharciga waan dhawri doonaa oo beer noo gaar ah ayaan ku ilaashan doonaa oo garaaid ku wareegsanyahay ileen waa dameer xildhibaan qabee.
Walaalayaal ururka maanta I soo sharaxa si wayn ayuu iiga faaiidaysan doonaa oo cod aan hore loo arag ayuu heli doonaa anigoo ka wakiila dhammaan xayawaanka qashin cunka ah ee ku nool caasimada xidhiidhna la samayn doona dhammaan xayawaanada ku dayacan magaalooyinka kale ee dalka iyo wadamada jaarka.
Walaalayaal hadii aad taariikh nololeedkayga ka waydaan aqoon waxbarasho mid maadi ah iyo mid diimeed toona, waxaan la qabaa musharaxiin badan oo u tartamaya golaha deegaanka Hargeysa kuwaas oo awood u lahaa inay wax bartaan balse khasaariyey wakhtigoodii xiligii ay waxbaran lahayeen, halkay aniga iiga suurtoobi wayday in aan tago xarun wax barasho waayo waxaan ahay dameer oo layma ogolayn inaan wax barto, bal se hankayga way ku jirtay in aan mar uun wax barto sida aan maantaba damacayga iyo hammigayga ugu jirto inaan noqdo xildhibaan golaha deegaanka Hargeysa.sidaa daraadeed waxan mar labaad idinku dhiiri gelnayaa inaad u fiirsataan codsigayga horaantiisii kaas oo aan idiinku sheegay amaanadayda, kartidayda, dedaalkayga iyo aqoontayda, waxanan idinka rajeynayaa in aad iga aqbali doontaan.
Musharax Qoofal Hanyare
Mohamed Ibrahim Ali (Af-gaab)
Yaa Noqon Doona Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya, By – Omar Dhicisow
Maqaal (Allsomali24): Sida aan wada ogsoonahay tan iyo bisha bish September oo ahayd markii la doortay Madaxweynaha cusub ee Somalia Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa waxaa looga fadhiyaa inuu soo hordhigo Barlmaaan qaranka qofkii soo dhisi lahaa dawladdii ugu horeysay ee aan ahayn ku-meel-gaadh.
Haddaba faaladan gaaban waxaan ku falanqayn doonaa shakhsiyaadka ugu dhawdhaw ee la filayo in maalmaha soo socda midkood lagu dhawaaqo.
Xilka Ra’iisulwasaaraha cusub ayaa la filayaa inuu qabto musharixiin ka soo jeeda bisha Daarood oo inta u sharaxani aysan ka yarayn 12 qof. Tiradani waa inta iska damaaciday ee ku sugan magaalada muqdishio aadoo ay jiraan kuwa kale oo weli shaqooyinkoodii ka soo tegin ay dalka dibaddiisa ku haysteen oo soo dirsaday CV ama kartida kale ee ay u leeyihiin qabashada xilkan.
Waxaa la xaqiijinayaa in madaxweynhu uu wada eegay CV-yada la soo dirsaday oo idil, ayadoo la xusay haddana in xilkan aan loo eegayn heerka waxbarashaa oo keliya ee ay muhiim tahay dhinacyada hoggaaminta ( leadership) iyo kartida uu qofku u leeyahy inuu hogaamiyo dawlad Soomliayeed. Madaxweynaha ayaa culays badan ka haystaa siduu u kala qancin lahaa seddexda jilib ee Darood ugu waaweyn oo aad ugu loolamaya xilkani. Musharixiinta ka soo jeeda gobolka Puntlad ayaa doorarkii dawladihii hore ka cayaareen aad looga dayrinayo halka Beesha Sade loo arko in miisan siyaasadeed lahayn aadse ay u xayaysiinayaan beelaha ka soo jeeda gobalada dhexe oo la aaminsan yahay inay xulafo gaar ah yihiin. Beesha Absame ayaa muasharixiin fara badan sanadka keenay oo aan horey loo arag, miisaankooda siyaasadeed ee ay yeesheena uu keenay culays aan la filanayn.
Haddaba bal aan eegno fofka uu madaxweynuhu ka xulan doono dadka ugu cadcad ee lagu soo koobay dhawrkan qof:
- Xildhibaan Xuseen Khalif
- Dr. Axmed Sh. Ali ( Doodijo)
- Faarax Cabdisamed (Afey)
- Saacid Garaad Shirdoon
- Nurudiin Diriye
- Prof. Keynaan.
Haddaan ku hormarno Xildhibaan Xuseen, waa sarkaal sare oo ka shaqeeya Bangiga Islaamka ee magaalada Jeddah ayna isku hayb hoose yihin Ra’iisal wasaare C/weli Gaas iyo Madaxweyne Cabdilahu Yusuf. Xuseen ayaa wax yar ka hor xilligii doorasha ka yimid shaqadiisa markii ugu horeysay ee uu siyaasadda soo galo marka laga reebo muddo gaaban oo dhalinyaranimadiisiii ka mid noqday Jabhaddii
SSDF ee uu hoggaaminayay Cabdilahi Yusuf ee ku sugnayd dalka Ethiopia, ka dibna u tacabiray dalka ka Kanada oo uu ku noolaa intuusan shaqada uu hadda hayo uga soo wareegin.
Xuseen waxaa lagu sifayn karaa shaqsiyaadka ugu dhawdhaw ee ka soo jeedaa beesha ee aragti qaranimo leh kana fog ninka aad looga dayrshay ee Gobolka Puntland ka taliya- waa Faroolee.
Sumcaddiisa Soomalinimo iyo bisaylka siyaasadeed ayuu kaga horeeyaa musharixiinta intooda kale.
Dr. Axmed Sheekh Ali ( Doodijo) wuxuu ka soo jeedaa Mareexan, noloshiisa inta badanna wuxuu ku qaatay Muqdishu marka laga reebo muddada uu waxbarasha ugu maqnaa Dalka Sudan. Dad badan ayaa hoosta ka xariiqaya inuusan qaban doonin xilkan sababo ay ka mid yihiin:
- Inuu sarkaal sare ka yahay xarkada Dami jadiid oo aysan umaddu diyaar u ahayn xilligani
- Inuu ka mid yahay isla xisbiga talada haya oo aan isku heli karin inay ku wada fariistaan kuraasta ugu sareysa hoggaanka dalka.
- Sidoo kale xiriirka uu la leeyahay dawladaha iyo ururada Islaamiga ah oo colaad weyn u soo jeedi kara dawladda.
Musharaxan ayaan aqoontiisa ku qaatay Jaamacadda Afriqiya oo aan ka magac weyneen jaamacadaha Soomaaliya marka la eego heerka aqooneed oo hooseysa iyo sida ay uaga soo gudbaan dadka wax ku barta oo u badan dalalka la deriska ah Suudaan. Khibradda shaqo ee musharaxab ayaa ku kooban ka mid nooqoshada xarakada Islaamiga oo Aabihiis magac dheer ku lahaa iyo asagoo in muddo ah hogaaminayay xarun ay leeyihiin Dami jadiid oo ku taalla magaalada Nairobi lana yiraahdo Al-shaahid Media. Xarunta waxay farac leedahay London oo uu hoggaamiyo Maxamed Al- amiin Al-haadi oo ah sarkaal sare oo dami jadiid. Warar ka soo baxaya xarakadan ayaaa soo xoogaysanaya maalmahan oo sheegaya in wafdi fara badan oo ka kala yimid daafaha adduunka kana tirsan xisbigan inay u dagaalamayaan inuu shakhsi Doodijo oo kale ah uu qabto xilkan maadaama ay dawladdani tahay miday leeyihiin. Wafdi uu hogaaminayo Sheekh Bashiir Amaan oo ay weheliyaan culimo ku caan ah xarakada ayaa ka yimid Yururb iyo Ameerika, fikirkana aad u riixaya. Halka madaxda xisbiga PDP aysan hoosta ka xariiqayaan in xilligan aysan marna suurtagal ahayn maadaama dawladdani thay mid qaran oo Barlamaan Soomaaliyeedna soo dhistay.
Ila hoose oo xisbiga ka mid ah ayaa sheegaya in Doodije uu aad uga dharagsan yahay in hawadiisu aysan suurtagal u ahayn xilligan laakiin uu ku mintidayo sidii nin Mareexan ah u heli lahaa xilka oo uu ku gorgortama mar kasta oo hamigiisa laga hor yimaado. Lama hubo qofka uu wato illaa iyo hadda waxaase laga dharagsan yahay oo uusan qarsan inuusan marna oggolayn shakhsiyaad ay ka mid yihiin Farmaajo, Saacid iyo Goonjeex, iyo Abdiweli oo maalmihii danbe suuqa magaalada warar badan oo been ah soo geliyay. Xubanahani waa isku hayb gaar ah waxayna ka soo jeedaan degaanka Cabudwaaq, lamase hubo inuu sababtaas u diiddan yahay iyo in kale. Doodijo ayaa asagu ka soo jeedaa gobolka Gedo iyo weliba qoysaska laga tira badan yahay ee Mareexaan .
Haddaba doorka uu ku leeyahay xisbiga iyo xarakada diiniga ah ee ka danbaysa iyo weliba saaxiibtinimada dheer kala dhaxaysa Madaxweyne Xasan oo uu udub dhexaad u ahaa doorashadiisa
ayaa dad badan magaciisa dhigi la’yihiin. Waxaase turunturo ku ah miisaanka hoose ee xilligan beeshiisa Mareexaan ay ku yeelan karto miisaanka siyaasadeed. Dad badan ayaa u arka in buunbuuninta Musharixiinta Mareexaanka ay ka hor keeni karayso tirada badan ee Daarood oo ayagu isku wada hayb gaar ah (Kablalax). Gaar ahaan Harti iyo Absame oo horey u wada watay Cabdiwel Gaas xulufo gaar ahna ku lahaa helista xilkani. Miisaanka ay ku leeyihiin Gobalada Puntland iyo Jubbooyinka ayaan ahayn mid aan la iska indhatiri karin oo aad muhim ugu ah taageerada madaxweynaha.
Dr. Faaraxa Cabdisamed ayaa ah asagana ku soo biiray hadalhayska maalmahan danbe wararkana lagu helayo inuu safka hore ku jiro. Haddaba waa shakhsi sidee ah faarax? Waxaa lagu sheegay inuu yahay khabiir arrimaha geeska Afrika, gaar ahaan Somaaliya aadna wax uga qora, sidoo kalena ka soo shaqeeyay hay’ado caalami ah oo horumarineed iyo machadyo cilmi baaris oo kala duwan. Aqoontiisa reer galbeedka ayaa waxaa u wheliya fikirkooda oo aad u aaminsan yahay. Waxaa la xusay inuu xiriir dhawdhaw la leeyasho reer galbeedka iyo dalalka geeska africa gaar ahaan Ethiopia iyo Kenya. Faarax ayaa la sheegayaa inuu asxaab dhawdhaw ku leeyahay dadka ugu dhawdhaw madaxweynaha. Sidoo kalena dad badan oo ay isku meel ku soo barbaareen ayaa la sheegayaa inay aad u riixayaan.
Taageeradani ma cadda waxaase la sheegayaa inay jawaab u tahay taageerada indha la’aanta ah ee beesha Habergidir u hayso Musharixiinta Mareexaan. Faarax ayaa lagu bartay faalooyinka uu ka bixiyo xaaladaha gobolka oo inta badan TVyada reer galbeedka ka hadla. wuxuu ku dhashay magaalada Muqdishu oo uu bartamihii 80yadii uga dhoofay dalka Kanada oo muddo ka dibna uga soo hayaamay Africa oo in muddo ah ka shaqaynayay, gaar ahaan dalka Ethiopia, ka dibna Europe degay. Sanadahan danbe oo u shaqaynayay hay’ado kala duwan ayuu aad ugu dhexmuuqday siyaasadda Somalia. Qaar ka mid ah Xisbiga talada haya ayaa cabsi badan ka muujinaya xiriirka guntadheer ee uu la leeyahay dawladaha ajenebiga ayadoo lagu sheego inuu ka mid yahay dadka sida gaarka ah ugu dhuundaloola Maraykanka iyo Ethiopia, lamase hubo inta ay la eg tahay saameyntooda in xilkan loo magacaabo. Sidoo kale warar kale ayaa sheegaya in Faarax uu tababaro cilmiga maamul-wanaagga ku qaatay dalka Isra’iil dhamaadkii 1990kii iyo horaantii 2000 muddoyin kala duwan. Arrintan ayaad mooddaa ayadana inay boog u yeelayso musharaxnimadiisa maadaama xisbi Islaami ah talada dalka hayo.
Walow uu ugu cad cad yahay Absame oo in ka badan 6 musharax u tartamayaan, doorkooda siyaasadeedna aan maalmahan danbe la iska indhatiri karin oo weliba dad badan aaminsan yihiin inuu laf dhabar u noqon karo xiriirka dawladaha ee Gobolka geeska Afrika. Wuxuu hayb hoose la yahay Suldaanka beeshaas ee Cabdi cali sonkor. Musharixiinta kale ee beesha sida Gen. Muuse ayaa isagu ku haray da’da, iyo wasiirkii hore ee Maaliyadda Xuseen Xalane oo xiriir dhaw la lahaa Sheekh Shariif Axmed. Sidoo kale nin la yiraahdo Prof. Keynaan oo UNESCO Nigeria haysta ayaa hadalkiisu mar soo yeeray faahfaahin badan aan ka haynin. Profesorka ayaa aqoon sare leh oo Soomaalida laga heli karin macalinna u ahaa madaxweyne Xasan yaraantiisii walow aan warkiisa suuqa Mudishu dib looga maqal. Sidoo kale nin lagu soo koobay magaciisa Cabdi dheere ayaa sharraxan oo uu abti u yahay indhacadde beesha Cayrna ay aad u buunisay walaw aanu waxba ka sheegi karin taarikhdiisa. Isku soo duubow tani waxay ka dhigaysaa Faarax musharraxa ugu xoog badan beeshiisa.
Saacid Garaad Shirdoon
Musharaxan ayaa magaciisu ka bixi la’yahay suuqa magaalada Muqdishu ee ku tiriteenka laga abuuro/ Haba yaraatee ma jirto wax khibrad ah oo uu leeyahay dawladnimo marka laga reebo ganacsi dheer oo uu in ka badan 30 sano ku soo jiray. Saacad ayaa wuxuu ku naaloonayaa taageero indha la’aan ah oo dadka magaalada Muqdisho deggen u hayaan. Taageeradan ayaa sal u ah qoyska xaaskiisa oo ah qof tixgelin ku leh bulshada degta Muqdishu. Saacid ayaa horey ula tartamay Xasan Sheekh diidayna inuu uga tanaasulo ka dibna halkaas isku dhac ka yimid aan weli la xallin. Taageeradiisa ugu badan ayaa ah inay in badan la taliyaashisa ah ay u wataan inuu qabto xilka. Dad badan ayaa shaki ka muujinayaa arrinkaas oo marar badan ula eh in heshiis hore jiray.
Nuurudiin Diiriye, waxaa lagu tilmaamay nin da’ yar muddo dheerna ka soo shaqaynayay Puntland marka laga reebo xilliyo kooban oo uu UNICEF Somalia ku sugnaa. Wuxuu horey ugula tartamay Faroole xilka madaxweynanimada asaga tiro yar lagaga guulaystay, ka dibna loogu deeqay inuu qabto xilka ugu sareeya ee wasiirka Qorshaynta oo uu ku gacansayray. Nuurudiin muddooyinka danbe wuxuu ku caan baxay ka qabgalka shirarka soomalida gaar ahaan dalka UK oo uu ka dhex muuqday shirarka Soomalidu isugu timaaddo. Faahfaahin badan kama soo bixin taariikhdiisa siyaasadeed walow Nuurudiin muddo dheer ku sugnaa Xamar asagoo hogaaminayay dib u doorashada Cabdiweli Gaas. Ka dib markuu Cabdiweli ku guuldaraystay madaxweynenimada ayaa la sheegayaa inuu bilabay damaaciisa ah Ra’iisal- wasaarenimo kuna qabsaday ka dib markuu is tusay inuusan soo noqon doono C/weli. Arrinta ayaa ah mid qoyskiisa hoose ka cadhaysiinaysa.
Nuurudiin ayaa inta badan isku hallayn ka qaba asxaab badan oo ku dhaw beesha Abgaal oo qaraabo yihiin halka uusan wax wanaag ah ka dhaxaynin Madaxweyne Faroole oo in mudd ahba aysan hoos isa seexinayn.
Musharraxan ayaa mar keliya magaciisu mar soo yeeray dib danbana loo maqal, waxaa lagu sheegay in aqoonyahan muddo dheer ka tirsanaa hay’adda UNESCO haddana ku sugan dalka Nayjeeriya. Wuxuu ka soo shaqeeyay waddmo fara badan. Hamigiisa siyaasadeed ayaan horey loo sheegin hadda ka hor, siyaasadna shaqo kuma yeelan inta la og yahy hadda ka hor.
Prof. ayaan beeshiisa hadalkiisa laga maqal, waxaana la sheegayaa in xiriir madaxweynuhu la sameeyay ku yimid maadaam uu macalin u ahaa xilliyadii hore ee Somalia burburin. Profesorka yaa aqoontiisu iyo khabradda uu leeyahay ka hormarinaysaa dhamaan musharaxiinta kale ee hadda tartamaysa.
Waxaa lagu tilmaamy shakhsi aad u xishood badan oo aan jeclayn in xukun lagu tartamo aadna uga fog qabyaaladda. Marar aan isku daynay inaan la xiriiro xaaskiisii hore oo ay walaalo yihiin Qoraaga caalmiga ah caanka ah ee Nuuradiin Faarax.
Dad badan ayaa hoosta ka xariiqaya haddii uu Keynaan musharaxnimdiisa ka dhabeeyo inuu orod ku dhaafi doono dhamaan inta kale ee aan soo xusnay.